China Modern Corten Steel Garden Art Metal Ball Sculpture Ho toy ny ravin-trano haingon-trano sy mpanamboatra | Piedra
Sarivongana maoderina vy vita amin'ny zaridaina vita amin'ny metaly vy ho haingon-trano any an-tokotany
Laharana modely: MCS39
Te hanana sary sokitra baolina kitra Steel Metal ankehitriny ve ianao? Tena mahafinaritra ho an'ny haingon-trano any ambanivohitra izay vita amin'ny Rust Surface. Betsaka ny vahiny te hividy ity sokitra vy corten tany am-boalohany ity ho toy ny haingon-trano any ivelany dia ho voajanahary sy miavaka ihany koa. Raha mahaliana anao ity entana ity dia mifandraisa aminay amin'ny fotoana rehetra.
Anaran'ny vokatra Baolina Sary sokitra vy Corten toy ny Exterior Ornament
Standard Fonosana poavatra
Item No. MCS39
hateviny 0,5 ~ 20mm
Application Natao ho an'ny haingo alokaloka, haingon-trano, haingo birao, haingon-trano zaridaina, haingon-trano, alokaloka paty na haingon-trano hafa.
Teny andoavam-bola Western Union na T / T
Andininy fanaterana Manodidina ny 30 andro ny sombin-javatra iray, ary arakaraka ny habetsany.
PackagingDetail Voaroy tsara ny fonosana any anaty ranomasina miaraka amin'ny pika tsirairay.
Fampahalalana momba ny antsipirihany
Saribao any ivelany ivelan'ny habakabaka lehibe
Weathering Corten vy
Vata hazo miaraka amin'ny sombin-javatra malefaka ao anatiny, sarimihetsika bubble amin'ny rivotra ary lamba firakotra ao anatiny
Zavamaniry Corten vy
A) Famolavolana serivisy manamboatra:
Raha manana sketsa na sary ianao dia afaka mandefa anay raha te hahita izany. Raha manana idealy ao an-tsainao ianao dia afaka mahita sary akaiky anay, mba hahafahanay manome sary vitsivitsy ho anao koa. Raha tsy manana drafitra ianao dia afaka manome soso-kevitra vitsivitsy.
B) Lehibe-tolotra efa natao:
Ny habeny dia azo hatsangana araka izay tianao. Matetika dia avy amin'ny 1meter ka hatramin'ny 10meter ny halavany na ny haavony. Raha te hamorona habe lehibe kokoa ianao, azafady avereno aminay hahafantatra izany.
C) Loko-namboarina namboarina:
Ny lokony dia azo atao toy ny nasehonay ny sarinay, na azonao omena loko ho an'ny sary hosodoko.
1). Voaaro sy tsiambaratelo ny zon'ny mpamorona.
2). Valin'ny fanadihadiana avy hatrany sy serivisy fivarotana teo aloha
3). 100% namboarin'ireo mpanakanto manan-talenta
4). Fanandramana efa am-polony taona maro ary laza tsara ho an'ny sary sokitra
5). Mpampiasa traikefa mahay momba ny matihanina
6). Ny antoka azo antoka, ny kalitao ambony ary ny fanaraha-maso kalitao
7). Ny fonosana azo antoka ary tsy ela dia ny fandefasana na ny fandefasana
8). Serivisy miraharaha ary aorian'ny ekipa mpivarotra hamaha olana
Previous: Tsangambato Voakitry Antoko Voakirana, Fampisehoana Gallery amin'ny sarivongana Ebay
Manaraka: Sary sokitra vita amin'ny varahina vita amin'ny kofehy vita amin'ny habakabaka / refy habe vita amin'ny sary varahina varahina
Mahavariana Ball Corten Steel Sculpture Rusty Surfa ...
Saribakin'ny alika Corten vy amin'ny alàlan'ny ivelany ...
Metal Tree Design ivelany metaly Art Sculpture R ...
Manapaka sary vongana Corten Steel ankehitriny voatavo S ...
Sarivongana sarivongana vita amin'ny sarivongana vita amin'ny vy ...
Abstract baoritra vita amin'ny zaridaina vy vita amin'ny vy kofera A ...